Wax ka Baro halka ay ka bilaabatay dacwaddda Badda ee Somaliya iyo Kenya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wax ka Baro halka ay ka bilaabatay dacwaddda Badda ee Somaliya iyo...
Wax ka Baro halka ay ka bilaabatay dacwaddda Badda ee Somaliya iyo Kenya
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ayaa 15-ka bishan March billaabeysa dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya, hase ahaatee dad badan waxba kama xasuustaan sida ay sheekada furitaanka dacwadda ku billaabatay markii ugu horreysay.
Bishii July ee sanadkii 2015-kii ayey dowladda Soomaaliya si rasmi ah maxkamadda ICJ ugu gudbisay dacwadda ku saabsan muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya.
Haddaba Sidey ku billaabatay?
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Fowziya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa BBC-da uga warrantay sida ay ku timid fikradda gudbinta dacwada, oo ahayd mid ka billaabatay iyada oo fadhisa Makhaayad ku taalla dalka Mareykanka.
“Anigoo New York jooga 2013-kii ayaa waxaa isoo booqatay Muna Sharmaani, hoteelki aan joognay ayey iigu timid, dhinaca makhaayadda ayaan u baxnay si aan shaah u cabno. Waxaan weydiiyay meesha ay ka shaqeyso, kaddib waxay igu tiri, ‘waxaan ka shaqeeyaa xafiiska badda ee Qaramada Midoobay’. Waxaan ku idhi ‘Muna bal ii ga warran badda Soomaalia’.”
“Afar waddan baa baddeena kusoo durkay”
Fowziya ayaa sheegtay in markii ay ogaatay in Muna ay ka shaqeyso arrimaha xuduudaha badaha ee caalamka ay go’aansatay in ay sharraxaad ka hesho sida loo wajihi karo xaaladda.
“Muna waxay igu tidhi ‘baddeenna afar waddan baa ku soo durkay’, afartii waddan bay ii sheegtay waxaana ku jirtay Kenya. Waxaan ku idhi maxaynu ka qaban karnaa? Waxay igu tidhi ‘waa loo dagaallami karaa laakiin anigu darajadeyda way hooseysaaye madaxda iga sarreysa ayaan kuu geynayaa’, Kaddib saraakiishii xafiiskeeda ayaan u tagay si buuxda ayaana la iigu sharraxay arrinta anigoo wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya,” ayey tidhi Fowziya.
“Shan qareen baa ii faahfaahiyay xaaladda, waxayna ii sheegeen in Kenya ay soo waddo warqado ay maxkamadda geyneyso sanadka 2014-ka haddii aan carqaladeyn weynana loo saxiixayo ayna xaq u yeelanayaan badda. Kaddib markii aan dalka kusoo laabtay ayaan madaxweynaha kala tashtay, laakiin wuxuu ii sheegay in baarlamaanku uusan oggoleyn in lasoo hadal qaado mowduucaas oo buuq badan ka dhici karo,” ayey tidhi.
Waxay Amb. Fowziya intaas raacisay in markii dmabe ay kulansiisay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muno Sharmaan.
“Markii ugu dambeysay ee aan Madaxweynaha ku noqday waxaan u sheegay in aan doonayo inaan Muno Sharmaan keeno Xamar oo uu dhageysto, markii aan keenay oo la fariisannayna arrintii waan ku qancinnay madaxweynaha.”
Halkaas ayey Fowziya iyo Muno Sharmaan kasii wadeen dadaalka ku aaddan loollanka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, sida ay Wasiiraddii hore u sheegtay BBC-da.
Ugu dambeyn waxaa lagu guuleystay in Baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo kudbinta dacwada, sidaasna kiiska loogu geeyay ICJ.
Muna Sharmaan oo dhowr sano ku caan baxday dadaalka ay ugu jirtay kiiska badda ee Dhinaca Soomaaliya ayaa sanadkii 2019-kii isaga baxday qareennada difaacayay Soomalaiya.
Taariikhda dacwadda Badda ee ICJ ee Soomaaliya iyo Kenya
Kulan aan caadiga ahayn oo ay yeesheen ayay Baaramaanka gebi ahaanba ku diideen in xitaa doodda ku saabsan arrintan dib loo dhigo, oo wasiirka arrintan khuseyso la siiyo fursad uu ku faahfaahiyo heshiiska.
Dhowr jeer oo la filayay in dhageysiga kiiska uu billowdo sanadkii 20-kii gudihiisa ayaa la baajiyay kaddib markii ay Kenya codsatay in waqti dheeri ah la siiyo sababo la xiriira saameynta cudurka Covid-19.
Dhawaan ayey garsoorka ICJ ku gacan seyreen dalab kale oo Kenya ay ku dooneysa dib u dhigista dacwadda, waxaana hadda loo ballan san yahay in dhageysiga uu furmo maalinta Isniinta ah ee isbuuca soo socda.
Waxaa qoray Abdishakur Asowe
Previous articleMadaxweynaha Uganda oo safiirka Cusub ee Somaliya ka gudoomay warqadihii.
Next articleWar deg deg ah: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo goordhow ku geeriyooday magaalada Nairobi
Kulan Caawa Rooble la yeeshay masuuliyijn sar sare oo ka...
Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa caawa wada hadal dhanka qadka Zoom-ka ku yeeshay, iyadoo wada hadalkan uu ahaa...
xildhibaan muslim ah oo ka tirsan baarlamaanka Hindiya oo dacwad ka...
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xarigga ka jaray masaajid...
Erdogan oo ku baaqay in wadahal lagu dhameeyo xiisada ka...
Xaflad lagu maamuusayay maalinta qaxootiga adduunka oo lagu qabtay magaalada...
Madaxweynaha Jubbaland oo Xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka Booliska,...
ku dhawad 30 Culimada Suufiyada ah oo ku dhaawacmay biriq...